Programmer career နှင့် ဂျပန် software industry (Questions and answers included) - A Programmer
A Programmer, 10 months ago42 min read 1102
ကျနော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ဂျပန်မှာ programmer အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်ကြုံခဲ့ရတာတွေကို ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောသွားပါတယ်။ chat box က questions အားလုံးကို ဖြေပေးဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့် အခုလို post တစ်ခုနဲ့ ထပ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ post မှာ တော်တော်များများမေးကြတဲ့ questions တွေပါမယ်။ ပြီးတော့ highlight လုပ်ပေးချင်တာလေးတွေထည့်ရေးပေးသွားပါမယ်။ ပထမဦးဆုံး အရေးကြီးတာလေးတွေကို ကျနော် အရင်ပြောသွားပါမယ်။
ဒါကတော့ အရင် post ပါ။
ဂျပန်ကအခုလက်ရှိအခြေနေမှာ တော်တော်လေးပြည့်စုံတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း အားနည်းချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဘာနဲ့ သက်သေပြလို့ရလဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက europe ဘက်က university တွေမှာ Japan လူမျိုးတွေ အေးအေးဆေးဆေး ကျောင်းသွားတက်နိုင်ပါတယ်။ သွားတက်ခဲ့တဲ့ လူအရေအတွက် လည်း ယနေ့နဲ့ယှဉ်ရင် အတော်လေးများပါတယ်။ international market ထဲမှာလည်း အရင်တုန်းက Japan Products တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ကားဆိုရင်လည်း ကားအလျှောက် ၊ တစ်ခြား IT devices တွေဆိုလဲ Japan brand နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်။ အခုတော့ အဲ့လိုတွေ့ရဖို့ခဲယဉ်းလာပါပြီ။ software industry လောကမှာလဲဒီအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ချိန်တုန်းက သူတို့က software industry တွေအတွက် foundation ကောင်းကောင်းချခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ company တော်တော်များများက အဲ့ဒီ အပေါ်မှာပဲနောက်ကျကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်ပြီးပြောင်းလဲတဲ့လူတွေရှိသလို ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်း တော်တော်များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလက်ရှိ Japan ရဲ့ software industry မှာ ရှေးရိုးစွဲ working culture နဲ့ လူတွေကတစ်ပိုင်း ခေတ်နဲ့အညီလိုက်လိုက်နေတဲ့ လူတွေကတစ်ပိုင်းဆိုပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဟခန်းဆိုတဲ့ company အမျိုးအစားတွေလဲအလွန်များပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဟခန်းဆိုတာ သူ့ company မှာ ဘာ products မှမရှိပါဘူး၊ outsourcing လဲမလုပ်ပါဘူး။ (လုပ်ကောင်းလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။)။ သူတို့ခန့်ထားတဲ့ လူတွေပဲရှိမယ်။ အဲ့လူတွေကို တစ်ခြား company ကိုပြန်အငှားချပါတယ်။ ကိုယ် အငှားချခံရတဲ့ company ကကောင်းရင် အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရပါတယ်။ မကောင်းရင်တော့………. ဒီနေရာမှာ မထင်ထားတာတစ်ခုပြောပြပါမယ်။ resource တစ်ခုကကြားထားတာပါ။ ဟခန်း company တွေကလူခေါ်ရင် ယန်း ၂၀၀၀၀၀ ပတ်ချာလည်နဲ့ခေါ်ထားပေးမယ့် သူတို့ပြန်အငှားချတဲ့ company တွေဆီက ကနေ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ယောက်ကို ယန်း ၄၀၀၀၀၀ ကနေ ၇၀၀၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိပြန်ယူပါတယ်။ But I am not so sure.
နောက်ထပ်တစ်ခုက resources တွေရှားလာတာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ တစ်ခြားနိုင်ငံက resources တွေကို အသည်းအသန်ခေါ်ယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာလူငယ် တွေထက် လူကြီးတွေကပိုများတယ်။ အသက် ၅၀ ၆၀ နဲ့ အလုပ်ဆက်လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ လူကြီးတွေများလို့လဲ Industry ကတော်တော်များများက ရှေးရိုးစွဲဖြစ်တာလားတေ့ာမပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုက generation တစ်ခုနဲ့ အတူ တစ်ကယ်တော်တဲ့မျိုးဆက်တွေပြတ်သွားမှာကိုတော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။
ဒီလိုတွေပြောလိုက်လို့ မကောင်းဘူးလားလဲမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင် အဆပေါင်းများစွာသာပါတယ်။ ကျနော် highlight လုပ်ပေးချင်တာလေးလဲပြီးပြီဆိုတော့ အမေးများတဲ့ question လေးတွေကိုဖြေပေးသွားပါမယ်။
Q: ဂျပန်ကို programmer တစ်ယောက်အနေနဲ့ လာဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။
A: များသောအားဖြင့်တော့ ဂျပန်ကခေါ်တာ entry position တွေများပါတယ်။ ဆိုတော့ အတွေ့အကြုံ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်နဲ့ Japan စာ N3 level လောက်ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတစ်ခုရှိတာက ဒီလိုလာတဲ့လူတွေဆို ရှေးရိုးဆွဲ company တွေ hakken တွေနဲ့တွေ့ရဖို့များပါတယ်။ ကိုယ်က အဲ့ဒီ culture နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ fine . အဲ့ဒီ culture နဲ့ မကိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ အရင် article မှာကျနော်ပြောခဲ့တဲ့နည်း ၂ နည်းကိုသုံးပေ့ါ။ senior role နဲ့လာချင်တဲ့သူတွေကတော့ agent အားမကိုးဘဲ ကိုယ့်ဘာသာရှာတာ အကောင်းဆုံးပါ။
Q: ဘွဲ့မရှိရင်ရောလာလို့ရလား၊ computer ကျောင်းဆင်းမဟုတ်ရင်ရောရလား။
A: ကျနော်သိသလောက်တော့ ဘွဲ့မရှိရင် ဂျပန်မှရယ်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေလဲမရပါဘူး။ computer ဘွဲ့ မဟုတ်လဲရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းရင်တော့ အရစ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် Emajor နဲ့ ပြီးတာဆိုလို့ computer ကျောင်းဆင်းမဟုတ်လို့ဆိုပြီး COE နေထိုင်ခွင့် Reject လုပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အထောက်အထားတွေနဲ့ reapply လုပ်တော့မှ အဆင်ပြေသွားတာပါ။
Q: programmer တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဘာတွေလိုလဲ ၊ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
A: ကျနော်ရေးထားတဲ့ post တွေရှိပါတယ်။ အောက်မှာသွားဖတ်ပါ။
ကိုနေလင်းအောင်ရေးထားတဲ့ programmer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့ post လည်းရှိပါတယ်။ ဒီမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော် recommend လုပ်ချင်တာကတော့ အခုမှ စမယ့်သူဆို သင်တန်းတစ်ခုခုတတ်ပါ။ သင်တန်းတွေတော့ ကျနော်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ recommend မလုပ်ပါ။
Q: ဘယ် အပိုင်းနဲ့ခေါ်တာများလဲ။
A: များသောအားဖြင့်တော့ web development ပိုင်းကိုခေါ်တာများပါတယ်။ android , ios နဲ့ network ပိုင်းတွေလည်းခေါ်ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ရှားပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ hunting လုပ်မှသာ မြင်ရမှာပါ။
Q: certificate နဲ့ diploma တွေလိုအပ်လား။
A: computer ကျောင်းဆင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လို certificate တွေလိုလဲဆိုတာတော့ ကန့်သတ်ထားတာတော့မရှိပါဘူး။ COE လျှောက်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ company တွေရဲ့ recommendation letter တို့ ၊ university professor ရဲ့ recommendation letter တို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ မရှိလဲရပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ဂျပန်လာဖို့သင့်တော်လား၊ ဒီက industry culture တွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိရဲ့လား။ ဘာတွေပြင်ဆင်လာရမလဲဆိုတော့ နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ မေးစရာတွေရှိရင် ဒီ post အောက်မှာ comment လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။
ခပြေးထားတဲ့linkတှကေ တနျးနှိပျလို့မရဘူးရှငျ့။ linkဖွစျမနဘေူး။
min kaung myat
php နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ work career လေးပြောပြပေးပါဗျ